အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အညိုရောင်ဆန် rotina - တရုတ်အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အညိုရောင်ဆန် rotina ပေးသွင်း,စက်ရုံ -Qianna
အော်ဂဲနစ်အညိုရောင်ဆန် rotina ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအညိုရောင်ဆန်ဖြစ်ပါသည် , ကနျြးမာရေးကိုအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုအောကျတှငျရှိပါတယ်
ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ဆယ်လီနီယမ်အဆင့်ကိုထင်နေသည်, အဖြစ်အညိုရောင်ဆန်တှငျတှေ့အချို့ဖင်နိုလစ်အူမကြီးကင်ဆာလျော့ချအန္တရာယ်နှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကားဖင်နိုလစ်အဖြူရောင်ထက်အညိုရောင်ဆန်အတွက်အများကြီးမြင့်သောပြင်းအားရှိ, ဒီအသင်းအဖွဲ့အဓိပ်ပာယျမွငျ့မားဆန်ဖြူစားသုံးမှုနှင့်မြင်မည်မဟုတ်ပါ. အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ၏မြင့်အကြောင်းအရာကိုလည်းကျန်းမာအူမကြီးနှင့်အစာခြေစနစ်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ.
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးဖိုင်ဘာအကြောင်းအရာကြောင့်, အညိုရောင်ဆန်မြင့်မားတဲ့အစားအစာကိုစားခြင်းနှလုံးသွေးကြော disease.A လေ့လာမှုဆန့်ကျင်အချို့ကာကွယ်မှု Philadelphia တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ပူဇော်စေခြင်းငှါအညိုဆန်တစ်ဝှမ်းတစ်သျှူးများ၏အလွှာကြောင်းအကြံပြု, (အရာဆန်ဖြူအောင်သောအခါအပယ်ပွတ်နေသည်), ပရိုတိန်း Angiotensin II ၏လုပ်ဆောင်ချက်လျော့ကျစေနိုင်တယ်, အရာသွေးကြောနှင့်သွေးဖိအားတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများသည်.
ဘရောင်းဆန်ပျော်ဝင်အမျှင်ဓာတ်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်, အရာ '' ဆိုး၏အောက်ခြေအဆင့်မှကူညီပေးသည်’ အဆိုပါ blood.There အတွက် LDL လက်စထရောအညိုဆန်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူဆန်ဖွဲနုဆီရေနံပစ္စုပ္ပန်အန္တရာယ်ရှိသောလက်စထရောအဆင့်ကိုနှင့်သွေးဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်ရန်ကူညီစေခြင်းငှါလည်းတချို့အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်, ကျန်းမာ '' ၏အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်နေတုန်း’ HDL လက်စထရော။
အစားအသောက်ဖိုင်ဘာမြင့်မားတစ်ဦးကအစားအစာကိုပိုငျသညျကိုတက်ဖြည့်ပါလေ့နှင့်အတူဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်ကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းသွား. ဘရောင်းဆန်အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လည်းဆန်ဖြူထက်နိမ့်များသောအညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုတစ်ဦးပိုမိုတည်ငြိမ်နှင့်ရှည်လျားသောတည်တံ့မြင့်တက်စေမည်အဓိပ်ပာယျ. ဤသည်မှာလည်းပိုရှည်နှင့်မုန်လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ် overeat မှလျော့နည်းဖွယ်ရှိများအတွက်ခဝါသည်သငျသညျစောငျ့ရှောကိုအထောက်အကူပြုရန်.
5.ကျန်းမာအူသိမ်အူမ function ကို
အညိုရောင်ဆန်အတွက်ဖိုင်ဘာဒီဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ၏အစာခြေအချိန်ပိုပြီးလုပ်ငန်းများ၌အစေ့ထက်ပိုမိုနှေးကွေးကြောင်းဆိုလိုတယ်, ဆန်ဖြူအပါအဝင်. ဒီအရှိသကြားဓာတ်ပိုမိုထိန်းချုပ်နှေးကွေးလွှတ်ပေးရေးကိုအသွေးစီးသို့နှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ဦးအနိမ့်များသောအညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်ဆိုလိုသည် (GI) အနိမ့် GI ကြွယ်ဝသည်အခြား grains.A အစားအသောက်များတွင်ထက်, မြင့်မားတဲ့ဖိုင်ဘာအစားအစာများကိုပိုမိုတည်ငြိမ်အသွေးသည်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲအမျိုးအစားအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည့်2ဆီးချိုရောဂါ.
ဘရောင်းဆန်မဂ္ဂနီဆီယမ်များစွာသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အရာကယ်လစီယမ်နှင့်ဗီတာမင် D.Magnesium နှင့်အတူကျန်းမာသွေ့ခြောက်သောအရိုးများအတွက်လိုအပ်မယ့် key ကိုအာဟာရဖြစ်ဖို့ထင်နေသည်သွေ့ခြောက်သောအရိုးတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်အဓိကအာဟာရဖြစ်ပြီးချို့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌အနိမ့်အရိုးသိပ်သည်းဆနှင့်အရိုးပွရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်. အညိုရောင်ဆန်တစ်ခုမှာခွက်ကိုခန့်ပါဝင်ပါသည် 21% သင့်ရဲ့နေ့စဉ်မဂ္ဂနီဆီယမ်လိုအပ်ချက်များ.
အရှည်(စိတ်ကြိုက် accept အရွယ်)
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အော်ဂဲနစ်အညိုရောင်ဆန် မံှု့ညက်, အော်ဂဲနစ်အာလူးမုန့်ညက် waterShelf ဘဝ: 24လများ
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကိုခေါက်ဆွဲခြောက်
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ပဲပုပ် spaghetti